ဒီအချက်တွေကြောင့် Crush လေးကိုလက်လျှော့လိုက်ပါတော့… In:Kawi Inspires, Life Hacks
ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ ??? In:Kawi Inspires, Life Hacks
“မရှက်သင့်တာကို ရှက်နေကြပြီလား” In:Kawi Inspires, Life Hacks
ဖုန်းကတရားခံလား? ကျွန်တော်တို့က တရားခံလား? In:Kawi Inspires, Life Hacks
သင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆိုးတွေကို အနာဂတ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ? In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires
“ပျော်ရွှင်စွာ သက်ဆုံးတိုင် နေထိုင်သွားကြလေသတည်း” ဆိုတာ လက်တွေ့မှာမရှိပါဘူး!!! In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires
“ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါပဲ” In:Kawi Inspires, Life Hacks
ငယ်ငယ်က “ပျော်ရွှင်စွာ သက်ဆုံးတိုင် နေထိုင်သွားကြလေသတည်း” ဆိုတဲ့ ဇာတ်သိမ်းမျိုး ပုံပြင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ ဘဝထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေက အမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမလား? လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်မလား? ဒါကမှ ဘဝဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ တနင်္လာနေ့လေးမှာ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ “ကဝိ” တို့က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ – Kawi Inspires Team – #NoHappilyEverAfter #KeepTrying #KawiInspires ...
အရင်တုန်းက သမီးရည်းစားတွေက ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လက်ထပ်ယူဖို့ကြိုးစားလေ့ ရှိကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ တကယ်တော့ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန််မှာ လက်ထပ်ကြတာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တီတီတာတာနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ တချို့စုံတွဲတွေက ကြီးမှလက်ထပ်လာကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲ?? သူတို့တွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ အတူနေထိုင်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေ စီစဉ်ကြလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်!!! အတွေ့အကြုံနဲ့ ရင့်ကျက်မှု အသက်ကြီးမှ လက်ထပ်မယ်လို့ သဘောတူကြတဲ့ စုံတွဲအတော်များများက ကြုံတွေ့လာရမယ့် အဆိုး၊ အကောင်း အားလုံးကို သိထားပြီးနှင့်သားဖြစ်သွားပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သွားပြီးတော့ ဖြစ်လာမယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ရင့်ကျက်မှုရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ အနာဂတ်အတွက် အသေအချာ စီစဉ်ရင်း အချိန်တစ်ခုကို စောင့်မျှော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………. ပညာရေး လိုအပ်မှု။ အခုခေတ်က ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကလို တက္ကသိုလ်ပညာရေးအောင်မြင်ရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ဘွဲ့ရထားပြီးလည်း ဒီပလိုမာလေးရထားဦးမှ၊ မာစတာလေး ရှိထားဦးမှ ရှေ့ဆက်သွားလို့ရတဲ့ခေတ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အတွဲတော်တော်များများက ပညာရေးတွေကို သူတို့လိုအပ်တဲ့အထိ ဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အထိ သင်ကြားကြပြီးမှ အိမ်ထောင်ရေးကို စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ………………………………. ခိုင်မာတဲ့ အလုပ်အကိုင်။ ပညာရေးတွေ စုံတကာစိအောင် တတ်မြောက်နေပေမယ့်လည်း အလုပ်အကိုင် ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးရင်လည်း လက်ထပ်ဖို့မဖြစ်သေးပြန်ပါဘူး။ လက်ထပ်ပြီးမှ လုပ်ငန်းထောင်မယ်၊ အလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို စွန့်စားရာရောက်ပါတယ်။ အခုခေတ်ကလည်း မကြောင့်မကြနေနိုင်ဖို့ဆိုတာ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်လုပ်မှရတဲ့ခေတ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း စုံတွဲတွေ အလုပ်ခိုင်မာမှုကို စောင့်ရင်း ထိမ်းမြားရေးက နောက်ရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ………………………………. နောက်ခံ ငွေရေးကြေးရေး။ တကယ်တော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးရင် ငွေရေးကြေးရေး ပြည့်စုံမှုဆိုတာ နောက်ကလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ တုန်နေအောင် ချစ်နေပါစေ၊ အရာရာ အကုန်အကျများတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ပြည့်စုံတဲ့ အထောက်အပံ့မရှိဘူးဆိုရင် ရေရှည်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါမလို့ တစ်ချို့အတွဲတွေ လက်ထပ်ဖို့ ပိုက်ဆံစုနေတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်ကြောင့်ပါပဲ။ ………………………………. အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်မှု။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတယ်ဆိုတာ ပြောတော့သာ လွယ်ကူပေမယ့် အတော့်ကိုဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါ။ မိသားစုလို စဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကြည့်လို့မရတော့ဘဲ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ့် partner အတွက်ပါ ထည့်တွေးပေးလာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရင့်ကျက်ဘဲ ကလေးဆန်နေရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ………………………………. အိမ်ထောင်ရေး နိုင်နင်းမှု။ မိသားစုရယ်လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် သားသမီးရေးတွေပါ စဉ်းစားလာရပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ အရွယ်ရောက်သူတွေက သားသမီးပျိုးထောင်ရာမှာ ငယ်ရွယ်သူတွေထက် အတော့်ကိုလွယ်ကူတာတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ အသိပညာတွေရော၊ ဗဟုသုတတွေရော အတော်အသင့် လေ့လာရရှိထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးကို နှစ်ယောက်အတူဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ရင့်ကျက်သွားတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ရည်းစားဘဝကနေ လက်ထပ်ယူဖို့အတွက် အခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့လည်း စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ တည်ငြိမ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရရှိနေပြီဆိုရင်တော့ တခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်တွေကိုပါထည့်စဉ်းစားပြီး အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းကို စလှမ်းနိုင်ပါပြီ။ အားလုံး ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန်ထက်စာရင်တော့ ပိုမိုအဆင်ပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ...
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အချိန်တော်တော်များများမှာ လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာတွေလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် အမှတ်တရတွေ ပြန်လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ခရီးသွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ ခရီးသွားသင့်လဲ??? ခရီးသွားခြင်းဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ် ဘဝတွေထဲက ခဏတာလွတ်မြောက်စေပါတယ်။ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ရှိတုန်းခရီးသွားပါ။ “We travel not to escape life but for life not to escape us” သင်ဟာခရီးသွားရတာ နှစ်သက်သူတစ်ဦးဖြစ်ရက်နဲ့ မိုးရာသီမှာခရီးသွားရတာ ကရိကထများတယ်ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိုးတွင်းမှာ ခရီးသွားရတာတခြားရာသီတွေနဲ့မတူတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလို့ပါ။ ဒါတွေက??? ခရီးစရိတ် သက်သာပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ ဧည့်ဝင်တာနည်းတဲ့အတွက် ဟိုတယ်တော်တော်များများက အခန်းခတွေလျှော့ထားကြပါတယ်။ အပြင်ထွက်မလည်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး game ကစား၊ အနားယူလို့ရပါတယ်။ ကားငှားခတွေလည်းသက်သာတတ်တာမို့ အကုန်အကျသက်သာပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ မြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေဟာ ပိုမိုလှပတတ်ပါတယ်။ ဥပမာသင်ဟာ နွေရာသီမှာ beach သွားနေကျဖြစ်တယ်ဆိုရင် မိုးတွင်းသွားကြည့်ရင် တမူထူးခြားတဲ့ အုံ့မှိုင်းမှိုင်းကောင်းကင်နဲ့ ပင်လယ်ရေပြာပြာက ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးရှိနေမှာပါ။ ခရီးသွားရာသီတွေမှာ လာရောက်သူများတဲ့နေရာတွေက မိုးတွင်းဆိုရင် လူရှင်းတတ်တာမို့ အေးအေးလူလူ ခရီးသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေလည်း စျေးလျှော့ကြတာမလို့ ့ပြည်ပခရီးသွားလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ မိုးရာသီမဟုတ်တဲ့အတွက် သွားလာရခက်တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့။ အခုဆိုမိုးရာသီမှာခရီးသွားရတာ ထင်သလောက်မခက်ခဲမှန်းသိလောက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ ခရီးထွက်သင့်မထွက်သင့် ချင့်ချိန်နေသူများအတွက် မိုးတွင်းခရီးထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ့် နေရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ စိုစွတ်တဲ့မုတ်သုံရာသီနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတု နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ ဧပြီလမှအောက်တိုဘာလအထိဟာ မိုးပါးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ဒီအချိန်မှာသွားလည်မယ်ဆိုရင် လည်ပတ်ရပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ဘာလီ၊ Lombok စတဲ့နာမည်ကြီးကျွန်းတွေ ကမ်းခြေတွေက သိပ်လှတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ World Heritage Site ဖြစ်တဲ့ “Yogyarkata” စတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အများကြီးရှိတဲ့အပြင် သဘာဝအတိုင်းလှပနေတဲ့ နေရာအများကြီးပဲရှိလို့ သွားသင့်ပါတယ်။ ၂။ Singapore Singapore မှာတော့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိတဲ့အတွက် Orchard Road ရဲ့နာမည်ကြီး shopping mall တွေမှာစျေးဝယ်ထွက်ရင်း အမျိုးအမည်များပြားလှတဲ့ snack တွေစားမလား၊ နိုင်ငံတကာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာပဲ သူတို့ရဲ့ signature ဟင်းလျာတွေစားမလား။ အပန်းဖြေဖို့အတွက်ဆိုရင် Universal Studio, Sentosa, Marina Baysands စတဲဲ့နေရာတွေမှာ ရှိတာမို့ မိသားစုတွေ အတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာပါ။ Night out ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Clarke Quay ရဲ့ များစွာသော Bar နဲ့ Club တွေက Singapore ရဲ့ Nightlife အရသာကိုကောင်းကောင်းပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ၃။ Malaysia Singapore ကိုရောက်လက်စနဲ့ Kua Lumpur ကိုပါလည်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေတာမလို့ shopping လည်းထွက်ရင်း နာမည်ကြီးမလေးဒူးရင်းသီးတွေစားရင်း လည်ပတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ မြို့ထဲမှာလည်ပတ်ရတာ ငြီးငွေ့လာရင် အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်လို့ရပါတယ်။ ၄။Vietnam Vietnam နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Hanoi မြို့တော်နဲ့ Halong Bay ဒေသတွေဟာအမြဲလိုလိုမိုးများတတ်ပြီး စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းနေနိုင်ပေမယ့် မိုးရာသီတွင်းလာရောက်လည်ပတ်သူများပြားပါတယ်။ ပြီးတော့ Vietnam ရဲ့အလှက မိုးအုံ့အုံ့လေးနဲ့မှ ပိုပြီးပြည့်စုံတာပါ။ Vietnam တောင်ပိုင်း ဒေသမှာရှိတဲ့ Nha Trang ဆိုတဲ့ ကမ်းခြေမြို့လေးကတော့ July နဲ့ August လတွေမှာမိုးရွာလေ့မရှိတဲ့ အတွက် beach မှ beach ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်သင့်တော်မှာပါ။ ၅။ Bangkok Bangkok မြို့ ကြီးကတော့ ရာသီမရွေး၊ အချိန်မရွေး ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြဘုရား၊ ဘုရင့်နန်းတော် စတဲ့နေရာတွေအပြင် Pattaya စတဲ့မြို့တွေကိုနေ့ချင်းပြန် သွားလည်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ Fine dining တွေကအစ အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ Street Food တွေ Night Market တွေလည်းများမှများမလို့ အစားတလိုင်းသမားလေးတွေအတွက်လည်း အကြိုက်ပါပဲ။ Bangkok မြို့ရဲ့နာမည်ကြီး shopping mall တွေမှာ luxury brand တွေအပြင် Made in Thailand စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ အဝတ်အထည်တွေက သင့်ကိုအများကြီးဝယ်မိစေပါလိမ့်မယ်။ ၆။ ပုဂံ အနီးဆုံးပေမယ့် မိုးတွင်းမှာ သွားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကိုရွေးပါဆို ပုဂံ ကိုသွားပါ လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်…. World Heritage Site အဖြစ်လတ်တလောမှရွေးချယ်ခံထားရတဲ့အပြင် စိမ်းစိမ်းလန်းလန်း သစ်ပင်တွေကြားထဲက ပုဂံစေတီပုထိုးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေက သင့်ကိုဖမ်းစားနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ မိုးရာသီ ပုဂံအလှက သာမန်အချိန်တွေထက် ထူးထူးခြားခြားလှပါတယ်။ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင်လည်း သစ်ပင်ပန်းမန်တွေနဲ့ သာယာလှပနေတာတွေ့ရမှာပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ အညာ ပုဂံမြင်ကွင်းကိုမြင်နေကျဆိုရင် စိမ်းလန်းနေတဲ့ ပုဂံအလှက အဆတစ်ရာ သာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ၇။ မန္တလေး အညာဒေသဟာ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတွေလောက် မိုးမရွာတဲ့ အတွက် မိုးတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့သင့်တော်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးမန္တလေးမုန့်တီ၊ ခိုတောင်မုန့်တီ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ အကင်မျိုးစုံကို မိုးအေးအေးလေးနဲ့စားရင်း၊ ဘုရားစုံလည်းဖူးရင်း စစ်ကိုင်းဘက်ကိုပါသွားရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ညနေခင်းတွေဆိုရင် ကျုံးဘေးမှာလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးပိန်တံတားမှာ အကြော်စုံလေးစားရင်း အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဦးပိန်တံတားရဲ့ မိုးအုံ့အုံ့ရှု့ခင်းလေးက ပိုလှနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မန္တလေးဟာ တခြားရာသီတွေမှာ နေ့ခင်းဘက်တွေ ပူပြင်းတဲ့အတွက် မိုးတွင်းမှာသွားရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အပူသက်သာပြီး လည်ပတ်ရအဆင်ပြေပါတယ်။ ၈။ အင်းလေး အင်းလေးကို မိုးတွင်းသွားခိုင်းရလားလို့ အမြင်မမှားလိုက်ပါနဲ့…. မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေကြားက အင်းရေပြင်ကျယ်ကြီးကို ငေးရင်း ဒေသထွက်အစားအသောက်တွေကို စားရင်းအနားယူလိုက်ရင် သင်ခရီးထွက်ဖို့ရွေးချယ်မိတာမှန်ကြောင်းသိလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက်က အင်းလေးပတ်ချာလည်မှာ ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝကို လေ့လာနိုင်မယ့် community based attraction places လေးတွေရှိလာတဲ့အတွက် သွားသင့်တဲ့နေရာတွေပိုတိုးလာပါပြီ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ နာမည်ကြီး ဟိုတယ်တော်တော်များများက မိုးရာသီမှာ အရမ်းတန်တဲ့ promotion package တွေထားပေးတဲ့အတွက် တန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မိုးရာသီ မှာသွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ထင်ရှားတဲ့ နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေနှောင့်နှေးမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်မပေးဖြစ်ဘူးဆိုရင် ခရီးကအပြန်ရရှိမယ့် ခွန်အားသစ်အကြံဉာဏ်သစ်တွေက သင့်ရဲ့အလုပ်တွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီး အကျိုးပြုစေမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာ တခြားတစ်နေရာရာကို သွားဖြစ်တယ် ဆိုရင်လည်း အကောင်းအဆိုး အတွေ့အကြုံလေးတွေ comment မှာ share ပေးခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ… ...
မုဒိန်းမှုဖြစ်တယ် မှုခင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် လူတော်တော်များများက ရွံကြတယ်။ ပါးစပ်သရမ်း၊ လက်သရမ်းတဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ အလွန်ဆုံး ဒီလူ ဒီအကျင့်ရှိတယ် ပဲပြောကြမှာပါ။ ဒီထဲမှာမှ “ယောကျ်ားလေးပဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့” လို့ပြောမယ့်သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ကျူးလွန်ခံရသူကိုတောင် အပိုလုပ်သူအဖြစ်မြင်ကြတတ်ပါတယ်။ တကယ်က လူတစ်ယောက်ကို ကာယကံမြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေးတာဟာ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာမဆို လက်မခံသင့်တဲ့ အမူအကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု (sexual harassment) နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးခြင်း၊ အရေးယူမှုတွေဟာ တခြားသောမှုခင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်အားနည်းနေပါသေးတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောက်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲ??? လူတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောက်အယှက်ပေးတယ် ဆိုတာ လူတစ်ဖက်သား စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ လိင်မှုကိစ္စကိုရည်ညွှန်းပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်ဖြင့့်ဖြစ်စေ၊ အပြုအမူနဲ့ဖြစ်စေ အနှောက်အယှက်ပေးတာကို ခေါ်တာပါ။ မဖွယ်မရာပုံတွေပို့တာ လုပ်ပြတာတွေဟာလည်း sexual harassment ထဲမှာပါ ပါတယ်။ ဘာလို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်သင့်လဲ??? ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးယူတယ်ဆိုတာ ခံရသူ (victim) ဘက်မှာ နစ်နာမှုများလို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က နေရာတိုင်းမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရွေးကြုံတွေ့နိုင်ရလို့ပါပဲ။ ထို့နည်းတူပဲ ကျူးလွန်သူဟာလည်း ယောကျ်ား၊ မိန်းမ နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ပြောတာ၊ ကိုင်တွယ်ခံလိုက်ရတာ ဘာများနစ်နာသွားလို့လဲလို့ ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုသော sexual harassment ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ခံရတဲ့သူတွေဟာ ရှက်ကြောက်ဒေါသထွက်ရရုံသာမကဘဲ စိတ်ဒဏ်ရာပါရသွားတတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို မယုံတော့တာ၊ လူကြားထဲသွားရမှာကြောက်တာ စသဖြင့် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံတွေ့ရတာမျိုးဆိုရင် အလုပ်ကိုသွားရမှာ ၀န်လေးလာတာ၊ အလုပ်ထွက်တာမျိုးအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာဆိုရင် ကျောင်းပျက်တာ၊ ပညာရေးဆုံးခန်းမတိုင်ခင် ကျောင်းနားလိုက်တာမျိုးတွေအထိ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဝန်လေးတာ၊ လူတွေကိုမယုံတော့တာမျိုးတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာ အများကြီးနစ်နာနို်င်ပါတယ်။ အသံတိတ်လူသတ်သမား မှုခင်းရယ်ဖြစ်ပွားရင် လူတွေက သတိထားမိသလို အရေးယူကြပါတယ်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအစော်ကားခံရသူတွေမှာတော့ ဒီကိစ္စမျိုးဟာ သူများကိုဖွင့်ပြောရမှာ ရှက်စရာလို့ ယူဆတာကတစ်ကြောင်း၊ မှုခင်းမြောက်မမြောက် မသိတာကတစ်ကြောင်း၊ တစ်စိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်တယ် အထင်ခံရမှာ၊ သူများတွေဝိုင်းကျဉ်မှာ စိုးတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် အများစုက ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြပါတယ်။ နောက်အကြောင်းရင်းကတော့ ထပ်ဖန်တလဲလဲဖြစ်ပွားတဲ့ case တွေမှာ သူတို့ကို ကျူးလွန်သူတွေဟာ သူစိမ်းတွေထက် အထက်လူကြီး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဆရာ၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ စတဲ့ ရင်းနှီးသူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်၊ ကျောင်း စတာတွေမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ကျူးလွန်သူတွေက ကျုးလွန်ခံရသူထက် ရာထူးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခွင့်အရေးပိုင်းမှာ သော်လည်းကောင်း သာလွန်သူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျုးလွန်ခံရသူအဖို့ လွန်ဆန်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွင့်ပြောဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့ဖွင့်ပြောလိုက်ရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေက မသိမသာရှောင်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အချိန်ကြာမှဖွင့်ပြောရင်လည်း “လုပ်တုန်းကခံနေပြီး အခုမှပြောရလား … နင်မကျေနပ်ရင်ဘာလို့ ငြိမ်နေလဲ” ဆိုတဲ့စကားသံတွေ။ “ခင်လို့စတာနေမှာပါ… နင်ကိုကဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေတာ” ဆိုတဲ့ အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ စကားသံတွေကို တိုးပေါက်နိုင်ပါ့မလား။ ဒီလိုနဲလူမသိပဲ sexual harassment လုပ်ခံ လိုက်ရတာမျိုးတွေဟာနေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ “ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးက ကျွန်မကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်….. ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြရတာက ပိုခြောက်ခြားဖို့ ကောင်းပါတယ်” ဒီစကားတွေဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရသူ တစ်ဦးရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရခြင်းဟာ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုသာဆိုရင် ဒီအိပ်မက်ဆိုးကြီးကို လူအများကိုပြန် share ရတာအဆိုးဆုံးအိပ်မက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Sexual harassment ကျူးလွန်ခံရသူတွေအတွက်တော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုမေ့ပျောက်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင်စိတ်ဓါတ်တွေကို သတ်ပစ်နေသလိုပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာမှာ တရားဥပဒေအရရော လူထုအသိုင်းအဝိုင်းကပါ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သက်ငယ်မုဒိိိန်းမှုလို အမှုမျိုးတောင်တရားခံလက်ရောက်ဖမ်းနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာရော??? ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းအလိုက်တာဝန်ယူမှု အားနည်းနေသေးတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အရှက်အကြောက်ကြီးမှု၊ အားနာတတ်မှု၊ သူများကိုစွပ်စွဲဖို့ ဝန်လေးတတ်မှုတွေဟာ ကျူးလွန်သူတွေအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှု၊ လိင်မှုကိစ္စ၊ social media ဖျော်ဖြေရေး စတာတွေခေတ်မှီလာသလောက် ဆိုးကိိျုးဖြစ်စေနို်င်တဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေကို တန်ပြန်လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေး(sex education)၊ တရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးနိုင်မှုတွေ နည်းပါးနေပါသေးတယ်။ ကွျွန်တော်တို့ အတူတားဆီးရအောင် ကျွန်တော်တို့တွေရော မှုခင်းဖြစ်ပြီးအရေးယူနိုင်သည်အထိ ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာလား??? မကာကွယ်ကြတော့ဘူးလား??? သင်ဟာ ဒီစာကိုဖတ်မိမယ် ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို လျှော့ချသင့်တယ်လို့ယူဆရင် အခုပဲကိုယ်တတ်နို်င်တဲ့ဘက်ကနေ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သင်ဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ sexual harassment နည်းပါးအောင် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ သင်သာ မိဘတစ်ဦးဆိုရင် သင့်သားသမီးကို ဒီလိုမပြုမူအောင် သွန်သင်ဆုံးမပေးမယ်။ သင်သာ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင် ကလေးတွေကို sexual harassment နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းရှင်းပြထားမယ်။ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြုမူခံရသူရှိနေရင် တတ်နိုင်သမျှကူညီပေးမယ်။ နားလည်ပေးမယ်။ ဒါပါပဲ။ သင်ဟာကျူးလွန်ခံရသူဆိုရင်လည်း ရှက်ကြောက်နေတာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီးရဲရဲရင့်ရင့် ဖြေရှင်းပေးပါ။ နောက်ထပ်ကျူးလွန်ခံရသူတွေမရှိအောင် သတိပေးပါ လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရှင်းပါတယ်… ကျူးလွန်သူကိုအပြစ်မပေးနိုင်လို့ သင့်ကိုယ်သင် ဘာမှမတတ်နို်င်ဘူးမထင်ပါနဲ့။ အမှားကိုအမှားလို့ လက်ညိုးထိုးရဲတဲ့သတ္တိကသာ အဓိကပါ။ ကွျွန်တော်တို့လိုနေတာ စာနာတတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံရယ် ပြတ်သားတဲ့ ခံယူချက်ရယ်ပါ….. ...
ကျွန်တော် တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို နောင်တရစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုလို့ ဆိုလို့ရသလို ဆင်ခြင်ဖို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အဲနေ့က မှတ်မှတ်ရရသောကြာနေ့။ ထုံးစံအတိုင်း သောကြာနေ့ဆိုတော့ ရုံးကနေ နည်းနည်းစောပြီး ဆင်းလာဖြစ်ခဲ့တယ်။ သောကြာနေ့လည်းဖြစ်၊ ရုံးကလည်း နည်းနည်းစောဆင်းလာတာနဲ့ လူက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်နေတယ်။ ညကျ လိုင်းလေးအေးဆေးသုံးပြီး မနက်နိုးတဲ့အချိန်မှထလည်း ရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့။ ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး လိုင်းကားရောက်လာပါတယ်။ လိုင်းကားပေါ်ရောက်တော့ လူမကြပ်ဘူး ထိုင်ခုံလည်း အသက်ကြီးကြီး အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ အေးဆေးပဲရလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး နားကြပ်လေးနဲ့ ထိုင်ခုံလေးမှီပြီး Facebook လေးသုံးရင်း လိုက်ပါလာတာပေါ့။ နောက်နှစ်မှတ်တိုင်လောက်ကျတော့ လူကနည်းနည်းများလာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခြေထောက်ကိုခပ်ကျုံ့ကျုံ့ထိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေသူတွေ အဆင်ပြေသွားအောင် နေပေးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်မှတ်တိုင်လောက်ကျတော့ တက်လာတဲ့လူတော်တော်များသလို လူကတော်တော်ကျပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သီချင်းအေးအေးဆေးဆေးလေး နားထောင်ပြီး ဖုန်းအသုံးမပျက်ဘူး။ အဲအချိန်မှာ Facebook က video လေးတစ်ခုတွေ့တာနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေမိတယ်။ ၈ မိနစ်လောက် video လေးထင်တယ်။ video လေးက မဆိုးဘူးဗျ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီ။ ပြီးခါနီးလေးမှာပဲ နောက်တစ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ ဆင်းတဲ့လူကဆင်းပြီး တက်တဲ့လူတွေကတက်လာတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာ သတိထားမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်ဘေးက အသက်ကြီးကြီး အဒေါ်ကြီးပေါ့။ သူမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းမလို့ထင်တယ်ဆိုပြီး တွေးလိုက်မိတာ။ video ကပြီးတော့မှာဆိုတော့ အကြည့်မပြတ်လိုက်ဖူး။ အဒေါ်ကြီးဆင်းသွားလား မဆင်းသွားလားလည်း သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ Video လေးလည်းအပြီး ကို်ယ့်ဘေးနားက အဒေါ်ကြီးနေရာမှာ အခုဘဲဝင်ထို်င်လိုက်တဲ့လူကို ကြည့်လိုက်တော့မှ ဗိုက်ကြီးသည်တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်တတ်စ ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ အဲတာနဲ့ ခုနက ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို ရှာကြည့်လိုက်တော့ ဟိုဘက်နှစ်ယောက်ကျော်လောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတာဗျ။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က အဲအဒေါ်ကြီးထက်စာရင် အများကြီးငယ်ပြီးတော့ ပိုပြီး သန်မာတဲ့ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်။ ဗိုက်ကြီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကလေးလေးနဲ့ လာတာကို အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က ထိုင်ခုံဖယ်ပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကခပ်တည်တည်နဲ့ ထိုင်နေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို အခုမှ စဉ်းစားမိတယ်။ အမှန်ဆို ကျွန်တော်ကသာ ထပေးလိုက်သင့်တာ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော် ဖုန်းထဲမှာ အာရုံရောက်နေပြီး သိပ်သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော် အဲအချိန်မှာ ထပေးလိုက်တဲ့ အဒေါ်ကြီးကို ကျွန်တော့်နေရာပေးလိုက်ဖို့လည်း ခက်သွားပြီ။ လူကအရမ်းကြပ်နေပြီး ကျွန်တော်ထလိုက်ရင် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့လူက ဝင်ထိုင်သွားမှာ။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ နောင်တရသွားမိတယ်။ တကယ်လို့ အဲဗိုက်ကြီးသည်အမျိုးသမီးလာတာကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရင် အဒေါ်ကြီးအစား ကျွန်တော်ထပေးမိမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေမိတာနဲ့ မသိလိုက်ဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ဘေးကလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင် ကျွန်တော်က တော်တော် လူမှုရေးခေါင်းပါးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီကိစ္စမှာ ဖုန်းကတရားခံလား? ကျွန်တော်တို့က တရားခံလား? သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဖုန်းက သက်မဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ကသာ ဖုန်းကိုသုံးနေတဲ့ အသိဉာဏ်ရှိသူတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကသာ သတိထားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကို အပြစ်တင်နေတာက အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး မဟုတ်လား။ အရာရာတိုင်းမှာ ဆိုးကျိုးနဲ့ ကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ကဆိုးကျိုးကို တတ်နိုင်သလောက် ဖယ်ရှားရမှာပါ။ ဖုန်းသုံးတာမှာလည်း အကျိုးရှိတဲ့အချက်တွေရှိသလို ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းသုံးနေလို့၊ ဂိမ်းဆော့နေလို့ အမေ့ခိုင်းတာကို ဘယ်နှစ်ခါငြင်းပယ်ပြီးပြီလဲ? လူတစ်ယောက် သင့်ကိုစကားသေချာပြောနေချိန်မှာ ရိုင်းပြစွာနဲ့ ဖုန်းဘယ်နှစ်ခါသုံးနေခဲ့ဖူးလဲ? ကားမောင်းရင်း ဖုန်းသုံးမိလို့ မတော်တဆ ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီလဲ? ပျော်စရာ စကားဝိုင်းတွေကနေ ဖုန်းသုံးတဲ့ဝိုင်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ? ကျွန်တော်တို့ သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ လို်နေပါပြီ။ ...
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော့ရှိကြပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် crush လေးတွေပေါ့။ ကိုယ့်ဘက်က အဆင့်တက်ဖို့မသေချာတဲ့အချိန် သူတို့ဘက်က မီးစိမ်းပြနေလား? မီးနီပြနေလား? ပြီးတော့ ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားနေတာကို သိသိရက်နဲ့တောင် သူတို့ဘက်က ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုယ့်အပေါ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် သင်လက်လျှော့လိုက်သင့်ပါပြီ။ မဟုတ်ရင်သင်ပဲ နာကျင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားပါ။ (၁) အာရုံမစိုက်ဘူး။ သင်ဘာတွေပဲလုပ်နေလုပ်နေ သင့်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ သင်ဘာပြောပြော သင့်ဘက်က ၀မ်းပန်းတသာပြောလည်း သူ့ဘက်က စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘူး။ သင်ပြောသမျှတွေက ဒီဘက်နားကဝင်ပြီး ဟိုဘက်နားကဘဲ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ (၂) ဘယ်တော့မှ စကားစပြီးလာမပြောဘူး။ သူ့ရဲ့အတွေးထဲမှာ သင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ကိုတကူးတက စကားစလာပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကစကားသွားပြောရင်တောင် “အော်” နဲ့ “အင်း” ကနေတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့သာ သင်ဟာသူ့အတွက်အရေးပါတယ်ဆို သင့်ဆီကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချဉ်းကပ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မျှော်မနေပါနဲ့။ (၃) ဘယ်သူနဲ့ Date နေလဲဆိုတာ စိတ်မဝင်စားဘူး။ သင့်ဘေးမှာ ဘယ်သူရှိနေလဲ။ သင်ဘယ်တွေကို သွားနေလဲဆိုတာ မေးလည်းမမေးဘူး။ စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။ သဝန်လည်းမတိုပါဘူး။ သင်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြိုက်သွားရင်တောင် သူဝမ်းနည်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၄) သင့်ဘက်က တွေ့ဖို့ချိန်းရင်တောင် သင့်ကိုဆင်ခြေတွေပေးပြီး လျှော်တတ်တယ်။ သင်နဲ့အတူ နှစ်ယောက်တည်းသွားမယ့်နေရာတွေဆို သူ့ဘက်ကစပြီး လျှော်ပါလိမ့်မယ်။သင့်ဘက်က စပြီးချိန်းလိုက်ပေမယ့်လည်း သူ့ဘက်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး သင်နဲ့ မတွေ့အောင်နေပါလိမ့်မယ်။ (၅) သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို နည်းနည်းလေးမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ သင့်ရဲ့မွေးနေ့၊ သင်ဘာတွေကြိုက်တတ်လဲ၊ သင်ဘာတွေကို စိတ်ဝင်စားလဲ၊ သင်ဘယ်သူနဲ့ အတူရှိနေလဲ၊ ဘယ်အရာတွေက သင့်ကိုပျော်စေလဲ၊ ဘယ်အရာတွေကိုသင်မုန်းလဲ၊ ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို နည်းနည်းလေးမှစိတ်မဝင်စားဘူး။ (၆) သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အခြားသူတွေနဲ့ Date နေမယ်။ သင့်အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ပေမယ့် သူများတွေအတွွက်တော့ ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေနဲ့သူ့ကိုအပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ သင့်ကို စိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့် အခြားသူတွေနဲ့ date ရဖို့ သူနှောင့်နှေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၇) အရေးတယူမဆက်ဆံတတ်ဘူး။ တကယ်တမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင် လူကြားထဲမှာတောင် သင်ဘာလိုအပ်မလဲဆိုတာ ကူညီဖို့ အသင့်စောင့်နေတာပါ။ သင့်ကို ဂရုတစိုက်နေဖို့၊ သွားရေးလာရေးဂရုစိုက်ဖို့၊ အစားအသောက်ဆင်ခြေဖို့၊ အမြဲတဖွဖွ ပြောနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်စိတ်မဝင်စားလို့သင်နဲ့အချိန်ပေးဖို့ကို ငြင်းဆန်နေရတာပါ။ (၈) သင်ကသူ့အတွက်တော့ လိုသုံးသက်သက်ပါပဲ။ သူသင့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူ့ဘက်က သင့်ကိုဆက်သွယ်ကောင်းဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်။ အကူအညီလိုအပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလိုအပ်မှသာ သင့်ကို သတိရမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ သင်သူ့ဘက်ကို စိတ်ယိုင်ကောင်းယိုင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမလိုအပ်တော့ရင် သင့်ဆီကနေ ပြန်ထွက်ခွာသွားမှာပါ။ (၉) သင့်ထက်အရာအားလုံးက အရေးကြီးနေတယ်။ သင့်ရဲ့ message တွေကိုမြန်မြန် reply မလုပ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ phone တွေကိုမကိုင်ဘူး၊ ပြန်လည်းမဆက်ဘူးဆိုရင် သင့်ထက်တခြားအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတာပါပဲ။ သင့်ဘက်က အများကြီးပြောတာတောင် သူ့ဘက်ကပြောချင်သလို မပြောချင်သလိုလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာတင်ရပ်လိုက်ပါတော့။ (၁၀) တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်မယ်။ သင့်ဘက်ကတော့ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တယ်။ စကားတွေကနေတဆင့် ဒါမှမဟုတ်အမူအရာတွေကတဆင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘက်က သတိမထားမိသလိုနေပြီး တတ်နိုင်သမျှရှောင်မယ်။ သင်ပြောတဲ့ စကားတွေကို လမ်းလွှဲမယ် တတ်နိုင်သမျှမကြားချင်ယောင်ဆောင်မယ်် ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်ကစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ sign တွေပြန်ပြနေတာပါ။ မီးစိမ်းနေတာတောင် မကူးလာဘဲရပ်နေတာပါ။ အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ crush ကသင့်ကို မကြိုက်ဘူးဆိုတာကို ပြနေတဲ့ signs လေးတွေပါ။ ဒီ့အပြင် တခြားအချက်တွေလည်း ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုပြန်မကြိုက်လောက်တော့ဘူးဆိုတာကို လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုက်ကြိုက်သူ့ဘက်က မပါလာဘူးဆိုရင်တော့ လက်လွှတ်သင့်ရင်လက်လွှတ်လိုက်ပါတော့။ မဟုတ်ရင်သင်ပဲ နာကျင်ရပါလိမ့်မယ်။ လက်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင်သူ့အပေါ် crush တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ထက်ကိုပိုနေပါပြီ။ Refrence Links – https://pairedlife.com/dating/30-Signs-That-Tell-A-Guy-Doesnt-Like-You– https://www.elitedaily.com/dating/signs-he-doesnt-like-you-back/2059434 ...
အကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်တွဲနေသလို ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးရဲ့ဘဝမှာ ကောင်းတဲ့နေ့တွေနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့နေ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့နေ့တွေက ကောင်းတဲ့နေ့တွေထက် ပိုပြီးများနေတယ်ဆိုတာတော့ ငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတတ်သလို ရှုံးနိမ့်မှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာရှိချိန်တွေ၊ relationship ပြဿနာတွေနဲ့ တခြားအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုး အဆိုးတွေနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါတွေမှာ အဆိုးတကာ့အဆိုးတွေထဲမှာမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုတော့ အနည်းငယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတွေတော်တော်များများက ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝရဲ့ဘေးဒုက္ခ၊ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ အသစ်တစ်မျိုးအဖြစ်ပြန်လည် အသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်နေပါစေ အဲဒါတွေအကုန်လုံးက ကျွန်တော်တို့ကို အတွေ့အကြုံသစ်တွေရရှိလာအောင် ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံသစ်တွေကို အသုံးချပြီး ကိုယ်ဆက်လျှောက်ရမယ့်ဘဝမှာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ ပေးဆပ်ရမယ့်ပမာဏက ကြီးမားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘဝမှာပေးဆပ်ထားရတဲ့အတိုင်း ရသလောက်ပြန်ပြီး ရယူကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်တွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေကို နားလည်လက်ခံနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်သွားပြီးတဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ပူနေပေမယ့် အတိတ်ကအရာတွေက ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ခွန်အားတွေကို အသုံးပြုပြီး နောင်လာမယ့်အရာတွေမှာ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ၂) ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့နဲ့ အရာရာကို လိုက်လျောညီထွေရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ ပြဿနာတွေကို လက်ခံနားလည်ပြီး ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကိုယ်လုပ်နေကျအတိုင်း တသမတ်တည်းဆက်လုပ်နေမယ့်အစား တခြားရှု့ထောင့်တွေကနေ ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၃) နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ် အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုအချိန်တွေ၊ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ မှားယွင်းသွားခဲ့တာလဲ အစရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကနေ ကိုယ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက် အဖြေရှာပြီး ဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ၄) နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေ၊ ပြဿနာတွေကိုနောက်မကျခင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရမှာ ကြောက်နေပြီး ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကို အချိန်မှီမြန်မြန်ဆန်ဆန် မဖြေရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ ပြဿနာတွေက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတတ်သလို ဖြေရှင်းရတာလည်းပိုခက်ပြီး ပေးဆပ်ရမှုတွေများလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်လုံးကို တတ်နိုင်သလောက် လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၅) အဲဒါအပြင် ကိုယ်ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေအတွက် list တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ list ထဲကအတိုင်း ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို တစ်ခုချင်းစီ စိတ်အေးအေးထားပြီး စနစ်တကျ လိုက်ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ စမ်းတဝါးဝါးဖြစ်မနေတော့ဘဲ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကနေလေ့လာပြီး နောက်ထပ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထိန်းချုပ်ပြီး အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာတွေကို ရသလောက်သင်ယူရမှာပါ။ အဓိကကတော့ ဒီလိုမျိုးအမှားတွေကနေပြန်ပြီး သင်ကြားရမှာကိုကြောက်မနေဖို့ပါပဲ။ လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာကို စတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် ကျရှုံးမှုတွေ၊ အမှားအယွင်းတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရမှာကို ကြောက်မနေပါနဲ့။ ကျရှုံးမှုတွေ၊ အမှားအယွင်းတွေနဲ့ ကြုံလာခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကနေ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေမယ့်အစား ရဲရဲဝံ့ဝ့ံနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ်လုပ်မိတဲ့အမှားတွေကနေ ပြန်သင်ယူပြီး အဲဒီလိုအမှားတွေ ဆက်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေ၊ အဆင်မပြေတာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်ပြီးလက်မလျော့လိုက်ဘဲ အဲဒါတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ကိုယ့်ဘဝရှေ့ရေးတိုးတက်အောင် ဆက်ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မှုတွေကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ...